Usekhethe ukuma umgijimi ongakhokhelwe
USANELISISWE Mbanjwa owanqoba i-IAU 50km African Championships, ngo-2019, eSagamu, eNigeria, usalinde ukukhokhelwa namanje Isithombe: SIGCINIWE
Sithembiso Mkhize | May 20, 2022
IKHALA ezimathonsi intokazi yaseMgungundlovu engumsubathi, uSanelisewe Mbanjwa, engakawutholi kuze kube yimanje umklomelo wayo wokunqoba i-IAU 50km African Championships, ngo-2019, eSagamu, eNigeria.
USanelisiwe owayeseqenjini lakuleli elalihambe noXolani Mabhida ongumqeqeshi, washaya intambo ngesikhathi esiwu-3.34.05.
Kwabesilisa intambo yashaywa ngomunye wakuleli, uThobile Mbolekwa (3.00.02).
Kuvela ukuthi nalo mgijimi akakayitholi inkece yakhe.
Bobabili babemele elakuleli eNigeria, i-Athletics South Africa (ASA) isanganyelwe ngu-Aleck Skhosana.
UMthandeni Nene, oyimenenja futhi ungumqeqeshi kaSanelisiwe, uthe balinde imali engangoR31 920.
Uveze ukuthi ukholelwa ekutheni yi-ASA okumele ibakhokhele imali yabo ngoba yiyona ayayibaqashile ukuyomela izwe eNigeria.
UNene uveze ukuthi usecabanga ukuyifaka kubameli i-ASA.
"I-ASA yiyona eyasisukela yathi asiyoyimela eNigeria. Kumele i-ASA yenze njengoba kwenzeka ebholeni. ISafa yiyona ekhokhela abadlali, hhayi abahleli bomqhudelwano. Inkulu kabi le mali ekweletwa uSanelisiwe. Indaba ye-ASA ngizoyibhunga maduze nabameli bami. Kubuhlungu ukuhlale ngibona uSanelisiwe ebalisa," kubeka uNene.
UNene uveze ukuthi ngenxa yokuxhaphazeka okukhona kwezokugijima, uSanelisiwe usamile kwezokusubatha, usagxile esikoleni.
UHezekiel Sepeng, omele izindaba zabagijimi kwi-ASA, utshele Isolezwe ukuthi ngokomthetho akubona okumele bakhokhele abagijimi kodwa yikomiti laseNigeria elalihlela umjaho.
Uthe ikomiti kumele lifake imali kwi-akhawunti ye-ASA, yona bese iyidlulisela kubagijimi.
Uthe bayayilwa indaba yabagijimi. Akakufihlanga ukuthi i-Athletics Federation of Nigeria (AFN) ibathwalisa kanzima.
"Ngicela ukucacisa lokhu, esikhathini esiningi imiqhudelwano engaphansi kweCAA (Confederation of African Athletics) kayikhokhi. Kodwa okwaseNigeria kwakwehlukile. Ikomiti elalihlela umqhudelwano lakuqinisekisa ukuthi abazonqoba bazokhokhelwa. Indaba yaleli komiti siyayilwa. Kumele bakhokhele laba basubathi," kubeka uSepeng.
USkhosana uvumelane noSepeng, wathi esengumengameli we-ASA, babhalela inhlangano ephethe ezokusubatha eNigeria baze bancama.
"Sengiyasola ukuthi le nto yokungakhokheli abagijimi yinto yakhona eNigeria. Uthi bewazi nje ukuthi kuze kube yimanje abakakhokhelwa abasubathi abanqoba kumaCAA African Championships, ayengo-2018, eNigeria? Akithina kuphela esingakhokhelwanga kodwa wonke amazwe ayeyingxenye yalo mqhudelwano. Ngiphinde ngathola nokuthi kukhona abanye abagijimi abangakakhokhelwa izimali zabo zokunqoba omunye wemijaho yakhona," kuchaza uSikhosana. UNene uthumele Isolezwe umyalezo wengxoxo nomengameli omusha we-ASA, uJames Moloi, lapho ethembisa ukusukumela udaba ngokushesha.